သမ္မာကျမ်းစာအရစိတ်ကျရောဂါကိုဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲမရ။ စိတ်ဓာတ်ကျတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမဆုံးနားလည်တာကအဲဒါဘဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် သတ္တိမရှိခြင်းနှင့်အဆက်မပြတ်ဝမ်းနည်းမှုမရ။ စိတ်ကျရောဂါကိုကျော်ဖြတ်ခြင်းသည်ဘဝ၌အလွန်ခက်ခဲသောအခြေအနေဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၎င်းကိုကျော်ဖြတ်မည်ဆိုလျှင်၎င်းကိုသင်သိသင့်သည် ဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ကုသမှုတွေနဲ့ ပိုအားကောင်းလာနိုင်တယ်။
ရှေ့ဆက်မသွားဘဲ၊ ကိုယ်ပိုင် သမ္မာကျမ်းစာသည်စိတ်ဓာတ်ကျနေသောဇာတ်ကောင်များစွာ၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကူညီခဲ့တယ် ထိုပြည်နယ်၏ ဘုရားသခင်ထံမှဤကတိလေးချက်သည်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုကျော်လွှားရန်ကူညီနိုင်သည်။
1 အဆင့် ၄ ဆင့်အရသမ္မာကျမ်းစာအရစိတ်ကျရောဂါကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲ
1.1 ၁။ သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ
1.2 ၂။ ဘုရားသခင်သည်သင့်ကိုနှစ်သိမ့်လိမ့်မည်
1.3 ၃။ ပျော်ရွှင်ခြင်းပြန်လာလိမ့်မည်
1.4 4. မင်းမှာအနာဂတ်ရှိတယ်
အဆင့် ၄ ဆင့်အရသမ္မာကျမ်းစာအရစိတ်ကျရောဂါကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲ
ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးအချိန်တွေမှာတောင်မင်းအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါ ဘုရားသခင်သည်သင်နှင့်အတူရှိသည်မရ။ မင်းကိုဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ခွဲထုတ်လို့ရတဲ့အရာမရှိဘူး။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသည်ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဘဝရဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ကမင်းကိုကူညီဖို့သင့်ဘက်မှာရှိတယ်။
“ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်က“ ငါမင်းကိုဘယ်တော့မှမထားခဲ့ဘူး၊ မင်းကိုဘယ်တော့မှစွန့်ပစ်မှာမဟုတ်ဘူး” တဲ့။
ဒါတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသေချာတယ် သေခြင်းအသက်မရှိ၊ ကောင်းကင်တမန်များ၊ အထွဋ်အမြတ်၊ အာဏာများ၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ သို့မဟုတ်လာမည့်အရာ
အမြင့်၊ အတိမ်၊ အခြားဖန်ဆင်းခံအရာတို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌ရှိသောဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ငါတို့ကိုကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်။
ဘုရားသခင်သည်မေတ္တာရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီးသင့်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးလိမ့်မည်။ ယေရှုသည်လူသားတစ် ဦး အနေနှင့်မြေကြီးပေါ်တွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီးသူလည်းဝမ်းနည်းခဲ့သည်။ မင်းဘယ်လိုခံစားရလဲသူနားလည်တယ်။ မင်းဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်နိုင်တယ်၊ သူကမင်းကိုထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင်ကမင်းကိုကုသပေးပြီးမင်းလိုအပ်တဲ့သက်သာမှုကိုပေးပါလိမ့်မယ်။
“ စိတ်မသာညည်းတွားသောသူတို့သည်သက်သာခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ ”
အကြောင်းမူကား၊ သူကိုယ်တိုင်စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုခံရသော်လည်း၊ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့ကိုကူညီနိုင်သည်။
ဟေဗြဲ ၂: ၁၇-၁၈
ဝမ်းနည်းခြင်းဟာထာဝရမတည်ပါဘူး။ ၎င်းသည်အဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ဟုထင်ရသော်လည်း၊ ဘုရားသခင်ကသူလုပ်လိမ့်မယ်လို့ကတိပေးတယ်။ မင်းရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကပျော်စရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုယုံကြည်ပြီးစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ပါ။
“ မျက်ရည်နှင့်ကြဲသောသူတို့သည်ရွှင်လန်းသောသီချင်းနှင့်ရိတ်လိမ့်မည်။ အစေ့ကိုကြဲ။ ငိုသောသူသည်ရွှင်လန်းသောသီချင်းနှင့်ပြန်လာပြီး၊ သူတို့၏ကောက်လှိုင်းများကိုဆောင်ခဲ့လိမ့်မည်။ ”
ဆာလံ ၁၀၃: ၁၁-၁၂
မင်းအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်။ ဘုရားသခင်သည်သင့်အတွက်ကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်များရှိသည်။ အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှာနိုင်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပါ။ မင်းရဲ့အနာဂတ်ကဘုရားသခင်လက်ထဲမှာရှိတယ်၊ မင်းအတွက်သူ့အစီအစဉ်တွေကအရမ်းကောင်းတယ်။ Israelသရေလလူတို့သည်ထွက်ပေါက်ကိုမမြင်နိုင်ကြသော်လည်းဘုရားသခင်သည်သူတို့အတွက်ပင်လယ်နီကိုဖွင့်ပေးတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်သည်အံ့ဖွယ်အမှုကိုလုပ်ဆောင်ပြီးသင်၏ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။
"ငါကမင်းအတွက်အကြံအစည်တွေကိုငါသိတဲ့သူပဲ၊ မင်းကိုမထိခိုက်စေချင်လို့အကြံဥာဏ်တွေ၊ အနာဂါတ်တွေကိုပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေရှိတယ်။ "
ယေရမိ ၃၃: ၃
ရောမ 8: 28
“ သခင်ဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့အပေါ်မှာရှိတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဆင်းရဲသောသူတို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောစေခြင်းငှါ၊ ငါ့ကိုထာဝရဘုရားဘိသိက်ပေးတော်မူပြီ။ သူသည်ကြေကွဲသောနှလုံးသားကိုပြုစုရန်ငါ့ကိုစေလွှတ်သည် သုံ့ပန်းများအားလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့်အမှောင်ထုမှအကျဉ်းသားများထံသို့ကယ်လွှတ်ခြင်း ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်နှင့်ငါတို့ဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်သောနေ့ကိုကြေငြာခြင်း၊ နာကျင်နေသောသူအားလုံးကိုသက်သာစေရန် ဇိအုန်မြို့၌ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောသူအပေါင်းတို့ကိုပြာကိုအစားလှပသောသရဖူကိုပေးအံ့။ ငိုမဲ့အစားပျော်ရွှင်မှုဆီ y စိတ်ဓာတ်ကျနေမယ့်အစားချီးမွမ်းခြင်း ၀ တ်ပါ. သူတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းသပိတ်ဟုခေါ်ကြလိမ့်မည်။ ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းအဘို့
ဟေရှာယ ၄၃: ၁-၃
ဘုရားသခင်သည်သင့်အနား၌အမြဲရှိနေမည်ကိုသတိရပါ။ သို့သော်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်ပထမခြေလှမ်းကိုသင် ဦး ဆောင်ရမည်။ ငါတို့မင်းကိုပေးတဲ့အကြံဥာဏ်တိုင်းဟာမင်းကိုယ်တိုင်တွေ့ရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါက်ကနေရုန်းထွက်နိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမင်းယုံကြည်တယ်ဆိုရင်မင်းကတန်ဖိုးမရှိဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ သင်အကူအညီတောင်းခံရန်ပညာရှင်တစ် ဦး အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ ဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီနဲ့မင်းရဲ့အလိုတော်ကကျန်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်လိမ့်မယ်။
ဒါကဖြစ်ခဲ့တယ်! မင်းအခုသိဖို့ငါတို့မျှော်လင့်တယ် သမ္မာကျမ်းစာအရစိတ်ကျရောဂါကိုဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲမရ။ မင်းစိတ်ဝင်စားရင်သိချင်တယ် ဘုရားကျောင်းသွားဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်အတွက်ဆက်ကြည့်ပါ Discover.online ။